Amakhadi epulasitiki namuhla abe yimbonakalo ebaluleke kakhulu ephaketheni labo bonke abantu banamuhla futhi, empeleni, isikhwama sesibili. Abanye baneziningana (futhi i-credit, ne-debit), omunye ulawula eyodwa. Kunoma yikuphi, leli thuluzi lokubala nokulondoloza imali lilula kakhulu futhi linenzuzo eminingi ngaphezu kwemali. Uma ukusebenza kwakho kwezimali okuyinhloko kungukukhishwa kwemali nokukhokhwa kwanoma yikuphi ukuthenga, ama-akhawunti ku-cafe, njll, isisombululo esiphezulu sizoba yi-Maestro - ikhadi lokungena e-System Card lokukhokha. Lokhu kungenye yezinto ezingabizi kakhulu futhi ezingabizi ukugcina izinhlobo zeplastiki (futhi ngezikhathi ezithile zamahhala). Kulokhu, ukusebenza kwekhadi kwanele ngokwanele ukusetshenziswa kwalo.
Ukubhaliswa kwekhadi le-Maestro kungenzeka kuneminyaka engu-14. Lokhu kulungele, isibonelo, ukunikezela izimali ezinganeni zezindleko zephaketheni. Ubeka inani elithile, ocabanga ukuthi liyadingeka, kwi-akhawunti yengane yakho, futhi uyabasusa uma kunesidingo (noma ukhokhele i-movie, i-cafe, isitolo). Lokhu kancane kancane kukhula ekufundeni kwezezimali, futhi omdala ufunda ukusebenzisa imali nezinye izindlela zokukhokha.
Ngokuvamile, amakhadi aseMaestro asetshenziswa izinhlangano njengezikhadi zamholo. Ukuzikhonza kuneshibhile kunesigaba se-Standart, isibonelo, futhi ukusebenza kuyafana:
Ukuhoxiswa kwemishini yemali (kubandakanya kwamanye amazwe omhlaba);
Ukukhokha ngamakhadi wekhadi esitolo, yokudlela, njll;
Izinkokhelo nezinkokhelo kwi-Inthanethi;
Ukukhishwa kwamakhadi angeziwe ku-akhawunti efanayo;
Ukusetshenziswa kwezinsizakalo ezengeziwe zebhange (ukukwazisa nge-SMS, ibhange le-Inthanethi, njll).
Ukukhokha ngekhadi le-Maestro kungenzeka kuphela ngemuva kokudlula inqubo yokugunyazwa, okuqinisekisa ukuphepha kwemali yakho futhi iwavikele ekufinyeleleni kwi-akhawunti ye-scammers. Ngaphezu kwalokho, ingahlonywa nge-chip (eyengeziwe "umshuwalense") noma kuphela umshini wamagnetic. Kwenzeka njengelungu elimhlophe (okuyisisekelo), ngakho akunjalo.
Emhlabeni jikelele, amakhadi aseMaestro, njenge-Visa system yokukhokha i-Visa, yiyona ndlela ejwayelekile kakhulu yokukhokha nokukhokhela. Zilungile ngokwezibalo zamanani / iphakheji yamasevisi anikeziwe futhi kulula ukuyisebenzisa. Ngesikhathi esifanayo, izinga lokuthembeka kwala makhadi alibi kakhulu kunezinye izigaba zepulasitiki.
Ngokuvamile, amakhadi aseMaestro anikezwa njengamakhadi wesipho lapho ebhalisa isikweletu somthengi esitolo, isibonelo. Kungasetshenziselwa ukwenza noma yiziphi izenzo, okuvumela ukuba uqoqe amabhonasi emisebenzi eyenziwe futhi uthole amathuba ngokushintshanisa amaphoyinti okuthenga, amasevisi, amathikithi, njll. Ngaphezu kwalokho, lesi sigaba samakhadi epulasitiki ngokuvamile sikhishwa kubafundi, abafundi abaphothule izifundo zokufunda, abahola impesheni Futhi abahlomula ngokudluliswa kwezimpesheni kanye nezinzuzo zomphakathi.
Amakhadi we-Maestro, njengawo wonke amanye, angavulwa ngama-ruble, amadola noma i-euro ukuze asebenzise kangcono futhi asebenzise inzuzo kubo hhayi kuphela ezweni lethu, kodwa nakwamanye amazwe. Naphezu kokuthi le plastiki iyona engabizi kakhulu futhi engabizi, ayilahlekelwa ukusebenza kwayo kanye nokuvikeleka kwayo, njengoba inikeza amakhasimende asebhange inhlanganisela engcono yemisebenzi ebanzi ekuthengisweni kwezimali kanye nemali enhle yokusebenza.
Funda ngesivinini abadala kanye nezingane. Speed ukuthuthukiswa Ukufundwa kanye inkumbulo: izindlela kanye umzimba
Sauce ngokuba imiqulu kanye sushi - incazelo zinhlobo, ezinye izindlela